Bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta Mtb, bisikileta ankizy - Beimudou
Ampahany tena ilaina amin'ny bisikileta rehetra.
Aza misalasala mizaha kodiarana, sisin-koditra sy kodiarana maro be ho an'ny bisikiletanao ao amin'ny fivarotanay.
Ny fivarotana anay dia vonona hanolotra anao ny safidin'ny lasely tsara indrindra amin'ny endriny sy karazany rehetra amin'ny bisikiletinao.
Mila rafitra azo itokisana sy maharitra ho an'ny bisikiletanao? Vonona hanampy anao ny mpitantana ny fivarotana.
Steeel karbaona ambony fram ankizy / bisikileta 12 ...
Ny bisikileta an-tendrombohitra dia niainga tany San Francisco, Etazonia tamin'ny 1977. Mety amin'ny toe-javatra sarotra arakaraka ny lalana. Vatana mahery, fanaraha-maso malefaka, kodiarana malalaka, mora aleha, matetika miaraka amina boaty fanamoriana azo ahodina amin'ny fitaovana fitehirizana asa na haingana kokoa. , ary rafitra mpitroka tampoka mba hampihenana ny korontana. Ty ...
Sina · tontosa soa aman-tsara mandritra ny 11 taona ny bisikileta iraisam-pirenena amin'ny bisikileta sy ny kilalao zazakely. Ny fampirantiana rehetra teo aloha dia nahasarika mpivarotra, mpitarika indostrialy ary mpitarika indostrialy. Tsy mbola nisy toy izany ny fampirantiana ary io koa no fampirantiana matihanina lehibe indrindra any Shina Avaratra. ...
Ny fampirantiana bisikileta China Shanghai dia tanterahina indray mandeha isan-taona, iray amin'ny fampirantiana bisikileta lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, ny fampirantiana bisikileta Shanghai farany teo dia nahasaraka trano heva 6 500 mahery, fampiratiana mihoatra ny 2.000, ny isan'ny mpivarotra dia nahatratra olona 200,000, natao tao Shanghai N ...
Niorina tamin'ny 1985, China Cycling Association (CBA) dia fikambanana nasionalin'ny indostrian'ny bisikileta ao Shina, fikambanana sosialy tsy mitady tombom-barotra ary olona ara-dalàna. Izy io dia volontena an-tsitrapo ataon'ny bisikileta, bisikileta elektrika sy ny orinasam-pamokarana ao aminy, ary koa ny famokarana sy ny varotra mifandraika ...
Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta fandanjalanjana mavokely, Bisikileta fandanjana ankizy, Bisikileta / bisikileta 20 santimetatra, Bisikileta, Bisikileta mandanjalanja,